Ungayithatha kanjani i-burdock nge-pancreatitis? > Ukwelashwa okuhlukile
IBurdock ene-pancreatitis iyasiza ngoba izimpande, iziqu, amaqabunga nezithelo zesitshalo ziqukethe i-organic acid, amavithamini A, C, B, P, E, acid acid, ama-tannins, ama-polysaccharides, amaprotheni nezinye izinto eziningi eziwusizo.
Uma usebenzisa ikhambi labantu njalo ngokuhambisana nokwelashwa ngezidakamizwa, ungaziqeda izimpawu eziyinhloko zalesi sifo. Ukwelashwa kweBurdock kwenziwa esigabeni sokuqala sesi sifo.
Ngaphambi kokuqala ukwelashwa ngezindlela ezihlukile, kubalulekile ukuthi uhlolwe ngokuphelele, uthole ukuthi yikuphi ukuxilonga okulungile futhi uthole izincomo kudokotela wakho. Ungaselapha lesi sifo ngejusi, umhluzi, i-tincture ye-burdock.
Umphumela wokuphulukisa we-burdock
IBurdock iyasebenza ekwelapheni izifo eziningi, ngakho-ke isetshenziswa njengokwengeza kwinqubo eyinhloko yokwelapha. Isitshalo silinganisa uhlelo lokugaya ukudla, asivumeli ukwenziwa kabusha kwesifo nokuqina kwe-bile.
Ngenxa yezindawo zayo eziqinile ze-choleretic, i-burdock isetshenziselwa i-gastritis, izilonda, nokuqina kwesibindi. Isitshalo sokuphulukisa sidambisa i-colitis futhi senze isimo esimaphakathi sabantu sitholakale sinesifo sikashukela.
Isimpande seBurdock nge-pancreatitis sinomphumela wokulwa nokuvuvukala ne-choleretic emzimbeni. Ukwelashwa kwe-Folk kususa izinhlungu, imisipha, kubhubhise amagciwane ayingozi.
I-tinad Burdock ikhuthaza ukuthuthukiswa kwezinto ze-pancreatic enzyme.
Umuthi wemvelo usiza ukukhulula isisu futhi uthuthukise isifiso sesiguli.
Izimpande zeBurdock zilusizo ikakhulukazi kumanyikwe esishukela.
Futhi, ikhambi labantu lisiza ukunciphisa umkhuhlane, yenza umzimba ube ngokwejwayelekile, ususe ubuthi emzimbeni. Isetshenziselwa ukuchoboza amatshe amakhulu ngokuxilongwa kwe-urolithiasis. Umuthi ubangela umphumela we-diaphoretic ne-diuretic effect, unomthelela ekuphulukisweni ngokushesha kwamanxeba, ukuqedwa kwezimpawu zokungezwani komzimba.
Ngakho-ke, umuthi wesintu, onokubuyekezwa okuningi okuhle, unesandla kulokhu:
Ukudambisa izinhlungu kumanyikwe,
Ukuqinisa ukwahlukaniswa kwe-bile,
Ukushintshwa okujwayelekile kwesitulo nokuhamba kwamathumbu okuvamile,
Ukwenza ngcono ukukhiqizwa kwe-insulin ye-hormone.
Ngaphambi kokuthatha i-tincture noma i-decoction, udinga ukwenza isiqiniseko sokuthi azikho izingqinamba. Umenzeli wokupholisa wemvelo akufanele aphuzwe uma isiguli sinokuzwela okwengeziwe kwizakhi zesitshalo. Futhi, ukwelashwa nge-burdock akwemukelekile ngesikhathi sokukhulelwa nokuqunjelwa.
Imvamisa ngezinhloso zokwelapha, zisebenzisa izimpande namaqabunga e-burdock. Ungaqoqa lesi sitshalo kunoma iyiphi indawo enobungani bemvelo, kude nomgwaqo nezindawo zezimboni.
Amahlamvu avunwa ezinyangeni zasehlobo. Ekuqoqweni kwezimpande kuphela izitshalo ezincane ezingekho ngaphezu konyaka ubudala ezivunyelwe ukusetshenziswa; zivunwa ezinyangeni zokuqala zentwasahlobo noma ekwindla. Ngenye indlela, ukuqoqwa kwezidakamizwa kungathengwa kunoma iyiphi ikhemisi.
Ngabe i-burdock ithinta kanjani umzimba nge-pancreatitis?
IBurdock inethonya elinamandla le-choleretic futhi inesandla ekukhiqizweni okusebenzayo kwe-enzymes ye-pancreatic. Umphumela onjalo uqinisekisa ukujwayeka kokugaya ngokujwayelekile futhi uyakwazi ukuvimba ukwanda kwe-pancreatitis, okuvame ukubangelwa ukuqina kwe-bile. Ngaphezu kwalokho, lesi sitshalo sivame ukusetshenziswa ekwelapheni izifo ezihlobene nepancreatitis: i-gastritis, ulcer peptic, i-pathologies yesibindi, i-colitis nesifo sikashukela i-mellitus.
Izici zokuphilisa ze-burdock ku-pancreatitis
Ukwenza kusebenze ukukhiqizwa kwama-enzymes we-pancreatic,
Ngaphezu kwalezi zakhiwo eziwusizo, i-burdock inezenzo ezilandelayo:
I-Lithotripsic (amatshe okuchoboza) nge-cholelithiasis ne-urolithiasis,
I-antimicrobial and antiseptic,
Ungayitholaphi i-burdock ye-pancreatitis?
Amaqabunga noma izimpande zalesi sitshalo zisetshenziselwa ukwelapha i-pancreatitis. Ikhula yonke indawo: eduzane nezindlu, emahlathini, emhlabathini owomileyo, eduze nemifula namachibi. Ukuze uvune, akufanele usebenzise lezo zitshalo ezikhula eduze kwamabhizinisi noma imigwaqo.
Amahlamvu ayavunwa ngesikhathi sokuqhakaza kwe-burdock, esivame ukuqala ngoJuni-Agasti. Futhi izimpande zalesi sitshalo kufanele ziqoqwe kuphela ngonyaka wokuqala wokuphila kwayo, ngoba ngokuhamba kwesikhathi, izinto zayo zokwelapha zichithwa ekukhuleni nasekuqhakazeni izimpande futhi impande iba yindabuko futhi ibe yimicu. Ukuvunwa kwale ngxenye yesitshalo kufanele kwenzeke ngoSepthemba-Okthoba noma ekuqaleni kwentwasahlobo.
Amacembe aqoqiwe omisiwe endaweni enomoya omuhle futhi avikelwe endaweni yelanga aze omile ngokuphelele. Ngemuva kwalokhu, izinto ezingavuthiwe zigcwele ezikhwameni zamaphepha noma ezitsheni zokhuni futhi zigcinwe endaweni eyomile neyomnyama isikhathi esingaphezu konyaka.
Izimpande zeBurdock ziyahlanzwa kusuka emhlabathini, zigezwe ngamanzi agobhozayo. Uma impande iminyene, iyanqunywa. Ngokulandelayo, izinto ezingavuthiwe zisikwa zaba izicucu ze-10-15 cm bese zibekwa ephepheni noma ngendwangu. Impande yomiswa endaweni enomoya omuhle noma esitofini saseRussia esigcolile. Izinto ezingavuthiwe ezomile zigcwele izikhwama zamaphepha noma ezitsheni zokhuni futhi zigcinwe iminyaka engaphezulu kwemithathu.
Ehlobo, ijusi le-burdock elisetshenziselwa ukwelapha i-pancreatitis lilungiswa kusuka emaqabungeni aluhlaza wesitshalo noma ezimpandeni ezintsha. Ngaphambi kokupheka, zigezwa kahle bese zomiswa ngethawula.
Ijusi lalesi sitshalo lisetshenziselwa njenge-ejenti ye-choleretic kanye nezifo zesibindi noma ipheshana elinomdlandla. Ingalungiswa ngokuzimela kusuka emaqabungeni amancane kanye nezimpande ezintsha noma ithengwe ekhemisi lapho ithengiswa khona njenge-concentrate.
Ukuze uzilungiselele ujusi, amaqabunga nezimpande ziyahlanzwa futhi zomiswe ngethawula. Izinto ezinjalo ezingavuthiwe zingumhlabathi nge-blender noma zidlule nge-grinder yenyama. I-gruel iyakhanywa, bese ujusi otholwayo uthathwa uhhafu wehora ngaphambi kokudla, isipuni esisodwa kathathu ngosuku. Inkambo yokwelashwa imvamisa isonto elilodwa. Ngemuva kwalokhu, sekwenziwe ikhefu isonto lonke, futhi inkambo yokuphatha iyaphindwa.
Ijusi kusuka ezimpandeni ze-burdock inambitha okubabayo kakhulu. Ukuqeda lesi sikhathi esingesihle, ungayifaka ngamanzi noma wengeze uju kuyo.
Ama-60 g amaqabunga athululelwa ku-600 ml wamanzi abilayo futhi afakwa amahora amane. Hlunga ukumnika bese uphuza ama-200 ml kathathu ngosuku isigamu sehora ngaphambi kokudla. I-infusion isetshenziselwa ukwelapha i-peptic ulcer noma ukuchoboza amatshe ku-gallder noma izinso.
Isipuni samaqabunga sithululelwa engilazini yamanzi abilayo futhi sigcizelelwa ihora eli-1. Hlunga futhi uthathe isigamu sehora ngaphambi kokudla 1/3 inkomishi. Ukumiliselwa kusetshenziselwa ukwelapha izifo zesisu, isibindi namathumbu.
Ukwelashwa kwe-pancreatitis nge-burdock
Esigabeni esibi sesifo, akanconyelwa ukwelashwa nge-decoctions yokwelapha noma ama-tincture kusuka ku-burdock. Kungcono ukwenza ukwelashwa kwe-pancreatitis engapheli ekuxolelweni. Ungaphuza umuthi kuphela ngemuva kokuvumelana nodokotela wakho.
Ukuqeda izimpawu zesifo, kusetshenziswa ujusi we-burdock. Uma isiguli sinezinkinga ngama-bile ducts noma isibindi, lo ngumenzeli omuhle kakhulu we-choleretic. Ukuze ukhiphe ujusi uthathe amaqabunga amasha nezimpande zezitshalo eziqoqwe ehlobo.
Isitshalo sigezwa kahle, somiswe ngethawula bese siqotshwa, ukufiphaza okuphumayo kuyakhanywa. Ijusi elungile ithathwa kathathu ngosuku isigamu sehora ngaphambi kokudla. Umthamo ngqo unqunywa udokotela ohambelayo.
Ukwelapha ngejusi kuhlala isonto lonke, emva kwalokho kwenziwa ikhefu lezinsuku eziyisikhombisa, futhi isifundo siphindwa futhi. Njengoba ujusi wemvelo ovela ku-burdock unokunambitheka okubabayo, kuxutshaniswa noshukela omncane noma amanzi okuphuza ukukunambitha.
Izimpande ezintsha zivame ukusetshenziswa kakhulu ukwenza ukumiliselwa okwenziwe ngomzimba kusuka ku-burdock. Ukuze wenze lokhu, izimpande ngesilinganiso se-5 g zigawulwa ngokucophelela, i-0.5 l yamanzi abilayo athululelwa futhi agxilisiwe ubusuku bonke. Ingxube ebangelwa ithathwa kathathu ngosuku imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla.
Kusukela ekhishwe empandeni yesitshalo, ethengiwe ekhemisi, ungalungisa umhluzi omuhle kakhulu wokuphulukisa. Izipuni ezimbili zezimpande zithululelwa emanzini angama-250 g bese zifakwa amahora amathathu kuya amane. Ingxube ebangelwa ilethwa kubilishi phezu kokushisa okuphansi, emva kwalokho umkhiqizo uphekwe imizuzu engama-20. Umuthi udakwa isigamu sehora ngaphambi kokudla kathathu ngosuku.
Amahlamvu nezimpande ze-burdock asetshenziselwa ukwenza izicubu zotshwala. Lesi sitshalo sichotshozwa ngokucophelela futhi sigcwala utshwala noma i-vodka. Umuthi kufanele ufakwe ngosuku, kuphela ngemuva kwalokho ungathathwa.
Kepha kubalulekile ukuthi ubheke ukuthi utshwala ne-vodka ekuxilongeni i-pancreatitis ngamanani amakhulu kungaholela ekwandiseni lesi sifo, ngakho-ke, i-tincture yotshwala isetshenziselwa ukwelapha isigaba sokuqala sesi sifo, lapho izimpawu zimnene futhi zingashiwongo.
I-Fitosbor No. 2
Izingcezu zommbila - izingxenye ezi-2,
Izimpande ze-chicory - izingxenye ezi-2,
Izimpande zeBurdock - 1 ingxenye,
Izimbali zomhlonyane zeChernobyl - ingxenye eyi-1,
Izithelo ze-anise - ingxenye eyi-1,
Oats Straw - 1 ingxenye,
Izithelo ze-Fennel - 1 ingxenye,
I-hairpin yegolide - ingxenye eyi-1,
I-Plantain - 1 ingxenye.
Isipiliyoni - iminyaka engama-21. Ngibhala izindatshana ukuze umuntu akwazi ukuthola imininingwane eyiqiniso ngesifo esihluphayo kwi-Intanethi, aqonde umongo walesi sifo futhi avikele amaphutha ekwelashweni.
Ukwelashwa okuphelele ngamakhambi esintu
Izitshalo eziningi ziyasebenza ekwelapheni i-pancreatitis, ngakho-ke kunconywa ukusebenzisa zonke izinhlobo zamalungiselelo amakhambi. Ukulungiselela isivuno sokwelapha, kuzodingeka inani elincane le-wort yase-St. John, i-sage, ihashe ihhashi, intambo, umhlonyane, izimpande ze-burdock, i-elecampane, izimbali ze-marigold, i-chamomile.
Onke la makhambi anezinto eziqinile zokulwa nokuvuvukala. Ukwakheka kwezitshalo kufaka izinto ezizuzisayo ezishukumisa ukusebenza kwamanyikwe, kususe i-bile, kunciphise ukudakwa, kuthuthukise ukugaya, kuqede namagciwane. Ngalesi sizathu, iqoqo elinjalo libhekwa njengelisebenzayo ku-pancreatitis.
Ingxube le yenziwa kabusha ngendlela yendabuko ngesilinganiso sepuni elilodwa ingilazi yamanzi abilayo. Amakhambi ayathelwa futhi afakwe ihora. Thatha ukumnika okwelapha kathathu ngosuku izinkomishi ezi-0,5.
I-Immortelle iphatha kahle i-pancreatitis ebekiwe, isusa ijusi ye-bile kanye ne-gastric, iguqule uhlelo lokugaya ukudla, inesibulala magciwane Isipuni sotshani sithululelwa ngamanzi ashisayo, ingxube ibilisiwe phezu kokushisa okuphansi. Umhluzi usupholile, uhlungiwe bese uthathwa izinkomishi eziyi-0.5 kathathu ngosuku.
Ngeke futhi ivimbe ngempumelelo inqubo yokuvuvukala ye-licorice, ekhiqiza ama-enzyme adingekile futhi inciphise ukuvuvukala kwamanyikwe. Ukulungiselela umhluzi, sebenzisa izimpande zezitshalo ezichotshoziwe ngenani lama-g 5. Athululelwa ngamalitha ayi-0,5 amanzi abandayo futhi abilisiwe.
Ukuze uthuthukise umphumela wokwelapha, engeza i-burdock ne-dandelion ezimpandeni. Umuthi uyaphola, uhlunga futhi udliwe phakathi nosuku.
IBurdock isetshenziswa ngenkuthalo emithini yendabuko Lesi sitshalo sinamagama ambalwa - i-burdock, umkhulu, i-burdock, ngakho-ke, lapho sifunda la magama ekwakhiweni kwemikhiqizo yezokwelapha, asikhumbuli nakancane ukuthi ngemuva kwamagama kuyilo elijwayelekile kunazo zonke. Ezimweni eziningi, lesi sitshalo singabonakala ezidakamizweni ze-choleretic nezokulwa nokuvuvukala, ngoba sinikeza umphumela omuhle kakhulu kule ndawo. IBurdock ingasetshenziswa njengethuluzi elizimele, nayo iyingxenye yezimali eziningi zokwelapha.
Umuthi we-Herbal usebenzisa ekusebenzeni kwawo zonke izingxenye ze-burdock. Akunasizathu sokusho ukuthi i-rhizome noma amaqabunga e-burdock acebile ezintweni ezithile, ngoba i-burdock nayo ihlukile ngoba ingxenye ngayinye iyisitolo sezinto eziwusizo emzimbeni. Ngakho-ke, lapho uthenga i-burdock, awukwazi ukunaka ukuthi iyiphi ingxenye yesitshalo eyingxenye ye-phytobox.
Ngenxa ye-burdock, abantu belashwa ezifweni ze-emathunjini, uhlelo lwe-excretory, ngcono isimo sezinwele, amazinyo nesikhumba, kuqede ukudakwa komzimba, kusize ukubhekana nesifo sikashukela, kusho ukubabaza i-mastopathy nezinye izifo.
I-Burdock ye-pancreatitis isetshenziswe ngempumelelo isikhathi eside. Inomphumela we-choleretic onamandla, obaluleke kakhulu ngokuntuleka kwama-enzymes wokugaya ukudla. Ekwelapheni ukuvuvukala kwe-pancreatic, i-burdock iyakwazi ukwenza kusebenze ukukhiqizwa kwama-enzyme wokudla anxephezela ukusebenza okunganele kwamapancake athinteka inqubo yokuvuvukala. Usizo olunjalo esigulini esine-pancreatitis luvimbela ukugayeka kwe-bile futhi lujwayeze ukugaya ukudla okujwayelekile, kucatshangelwa ukwehluleka kwamanyikwe.
Ngaphezu kokwelashwa okuqondile kwe-pancreatitis, i-decoction ne-tincture ye-burdock kungasiza nangamanye ama-pathologies wesistimu yokugaya ukudla - nge-gastritis, i-colitis, izilonda zesisu, nezifo zesibindi. Konke lokhu kungenzeka ngenxa yezakhiwo ezinama-burdock:
ikhulula izinhlungu kumanyikwe,
kunciphisa ukuqina kwenqubo yokuvuvukala,
ikhuthaza ukuhlukaniswa kwe-bile okuthuthukisiwe,
inempahla ebulala amagciwane
isungula ukunyakaza okuqhubekayo kwamathumbu,
kuthuthukisa ukukhiqizwa kwe-insulin.
Ngaphezu kwalokho, ku-burdock, izakhiwo zokuphilisa zingasebenza i-pancreas ukukhiqiza i-enzyme ye-pancreatic. IBurdock izosiza nakwezinye izifo - iyakwazi ukuguqula imetabolism, ine-diuretic kanye ne-diaphoretic impahla, ukuze umzimba ukhiphe ubuthi obudalwa lapho kulwelwa lesi sifo.
Ukukhishwa kweBurdock kuyingxenye yamalungiselelo e-lithotripsy ekwelapheni umdlavuza. IBurdock ine-antimicrobial, ukuphulukisa amanxeba nomphumela we-antigergic emzimbeni. Naphezu kwezakhiwo eziningi zokwelapha kanye ne-contraindication, i-burdock inayo, kepha incane. IBurdock ayinconyelwa ukuba ithathwe ngesikhathi sokukhulelwa nangomzimba wokuxhuma. I-burdock iphinde yahlukaniswa ngenxa yalezo ziguli ezingakwazi ukubekezelela lesi sitshalo. Kulokhu, akufanele uthenge ikhambi kusuka ku-burdock nakwezinye izilimo ze-phyto, lapho kungena khona njengenye yezakhi.
Kungcono ukwelapha ukuvuvukala ngokuqoqwa kanye nokuzilungiselela kwakho. Ukuze wenze lokhu, udinga ukwazi ukuthi uqoqa kanjani lesi sitshalo nokuthi uwukhulisa kanjani umkhiqizo owelapha. Ngokuvamile, amaqabunga e-burdock kanye nezimpande zawo asetshenziselwa le njongo. Izitshalo zokuvuna zingenziwa ngokuzimela ehlobo, lapho i-burdock ithola amandla ayo kanye namahlamvu amakhulu, anamila. Isikhathi esihle sokuvuna isitshalo nguJulayi no-Agasti. Lapho uqoqa i-burdock, udinga ukukhumbula ukuthi akusona isitshalo esisodwa, ingasaphathwa i-burdock, esidinga ukuqoqwa edolobheni lapho kunemigwaqo eminingi. IBurdock akuyona into engjwayelekile, ikhula cishe kuzo zonke izihlahla, ekuqaleni kwendawo yehlathi. Ngakho-ke, ukuqoqa ama-burdocks, kungcono ukuya endaweni ehlanzekile yemvelo.
Lapho ukhetha ingxenye ye-burdock ezosetshenziselwa ukwelashwa, iqiniso elilodwa elibalulekile kufanele libhekwe - impande yesitshalo inamandla amakhulu ngonyaka wokuqala wokukhula kwayo, ngakho-ke kunconywa ukusebenzisa kuphela impande ye-burdock encane.
Futhi esitshalweni esidala, wonke amandla empande achithwa ekukhuleni kwamaqabunga, impande iqukethe izakhi ezimbalwa zomzimba, ezihlisela kakhulu le ngxenye. Ungahlukanisa impande yaphakade ngokubukeka - ithambile, iyabhabha futhi inamafayibha. Uma usebenzisa impande ye-burdock njengekhambi, udinga ukuyigaya ngoSepthemba.
Amaqabunga noma izimpande zigezwa kahle, zomile futhi zifakwe emigqonyeni yamaphepha. Uma izimpande zikhulu, ziba yizicucu. Udinga ukugcina i-burdock ebumnyameni, kodwa uyigcine lapho isikhathi esingaphezu kweminyaka emithathu - uma kungenjalo ilahlekelwa umphumela wayo futhi i-decoction noma i-tincture yayo ngeke isebenze.
Uma kunesidingo sokuqala ukwelashwa kwama-pancreas ehlobo, khona-ke akunangqondo ukusebenzisa isithako esomile - kungcono ukwenza ujusi we-burdock. Kulula kakhulu ukuyilungiselela - zombili izimpande namaqabunga adinga ukugezwa, ukusikwa bese kufakwa ujusi. Kuhle ukuthatha amaqabunga amnyama anamafutha ukuthola ujusi omningi.
Odokotela batusa ukuthi uma kwenzeka kwanda i-pancreatitis bangathathi amakhambi abantu, kanti amaNarodnik ngokwawo athanda ukwelashwa nge-burdock uma sekuvele isidlulile futhi i-pathology isiphenduke ifomu elingamahlalakhona. Ngakho-ke, ukwelashwa kwe-pancreatitis kuqalwa kangcono lapho i-pancreas ithamba futhi ukuhlaselwa kudlula. Kulesi sigaba sokwelashwa, ungasebenzisa izingxenye ezahlukahlukene zesitshalo - i-burdock izimpande, amaqabunga. I-tincture esebenza ngempumelelo kakhulu kanye ne-decoction ilungiselelwe kubo, esebenza ngokushesha okukhulu, futhi ngokusetshenziswa okuhlelekile kwithuthukisa kakhulu impilo yesiguli.
Ijusi leBurdock lingathengwa ekhemisi likhemisi, lapho lithengiswa ngohlobo oluphelele, noma uzilungiselele.
Amaqabunga nezimpande ziyagezwa, zichotshozwe kwi-grinder yenyama noma ku-blender, bese ijusi likhanywa ukuphuma kwethonya. Kunconywa ukuba uthathe imizuzu engamashumi amathathu ngaphambi kokudla kwe-0,5 tbsp. l kanye ngosuku. Inkambo yokwelashwa okunjalo isonto elilodwa, ngemuva kwalokho odokotela batusa ukuthatha ikhefu isonto bese beqhubeka futhi. Njengoba ujusi we-burdock umunyu kakhulu ngokunambitheka, ungaxutshwa kancane ngamanzi, noma ufakwe noshukela.
Ukusuka kubhejane le-burdock, ungaphamba i-decoction. Izipuni ezimbili zempande ye-burdock engaphambi komhlabathi kufanele zithululwe ngengilazi yamanzi abilayo futhi yagcizelelwa amahora amane. Ngemuva kwalokho uketshezi lubekwa esitofu, ngemuva kokubilisa lubilisiwe cishe isigamu sehora. Umhluzi ohlungiwe kufanele uhlukaniswe kathathu futhi uphuzwe ngaphambi kokudla.
Ukwelashwa kweBurdock kuyindlela enhle yokutholwa kwemithi ethinta kabi isibindi. Uma uhlanganisa kahle lesi sitshalo futhi ulungisa umuthi, khona-ke ukusetshenziswa okuhleliwe kwe-burdock kuzosindisa umuntu ezifweni eziningi.
Ukudla okunempilo ekudleni kwe-pancreatitis
Ngaphezu kwemithi yabantu, ukunamathela ekudleni okwelaphayo kuyaphoqelelwa i-pancreatitis ne-cholecystitis. Lokhu kukuvumela ukuthi uyeke inqubo yokuvuvukala, ususe izinhlungu, wenze umzimba ube ngokwajwayelekile futhi uvikele ukukhula kwezinkinga ezinkulu.
Izinsuku ezintathu zokuqala ngemuva kokwanda, udokotela uthi makazila ukudla. Isiguli singaphuza kuphela amanzi okuphuza ngaphandle kwegesi. Emini, isiguli sivunyelwe ukungaphuzi amanzi angaphezu kwamalitha ayi-1.5.
Kuyo yonke inkathi yokulandela ukudla, kubalulekile ukuyeka ukusetshenziswa kokudla okufana nemifino, inyama noma umhluzi wezinhlanzi, ukudla okunamafutha nokuthosiwe, imifino eluhlaza nezithelo, okumnandi, ufulawa, ukudla okusemathinini, imikhiqizo ebhemiwe, imikhiqizo ebhakwe. Futhi, awukwazi ukudla u-ayisikhilimu, izitsha ezinezinongo nezinongo, amanzi acwebile.
Yini engingayidla ngemuva kokuhlaselwa yi-pancreatitis? Ngokuvuvukala kwamanyikwe, isiguli singadla:
Amaqanda angabi ngaphezu kwezicucu ezimbili ngosuku,
Imikhiqizo yobisi yokuqukethwe kwamafutha amancane,
I-Kissel, i-compote, umhluzi we-rosehip, itiye elibuthakathaka.
Akudingekile ukudla ukudla okushisayo; vele ufudumele isidlo kuya ekushiseni kwegumbi. Uma ukondleka okunekhono kuhlanganiswa nokwelashwa okuthe xaxa, umsebenzi wamanyikwe wenziwe ngendlela ejwayelekile.
Izici zokuphulukisa ze-burdock kuxoxwa ngazo kule vidiyo kulesi sihloko.
Umphumela wokwelapha kumanyikwe
Uhlu lwezimpawu eziwusizo ze-burdock lungaqhubeka ngokungenamkhawulo, noma kunjalo, sizogxila emathubeni wokuphulukisa maqondana nokugula okungathi sína njengokulimala kwamanyikwe. Kuyavela ukuthi i-burdock ene-pancreatitis ikhombisa isenzo esilandelayo:
Kwandisa ukukhiqizwa kwama-enzyme.
Imithi elungiselelwe kuyo isiza:
Susa ukunqwabelana kobuthi.
Shesha ukuvuselelwa kwezicubu.
Misa izimpawu zomzimba.
Ukusetshenziswa kwe-burdock uma kwenzeka kumanyikwe ama-pancreas kuthuthukisa ukwenziwa kwama-enzyme okudla, okubalulekile ekusebenzeni komoya okubuthakathaka.
Uhlobo luni lwe-pancreatitis olungasetshenziselwa i-burdock?
Iziguli eziningi ezinomdlavuza we-pancreatitis zizwe ngamakhono okwelapha e-burdock, kodwa bambalwa kubo abaziyo ukuthi hlobo luni lwesifo olungasetshenziselwa lona. Odokotela banaka ama-nuances anjengalawa:
Kwi-pancreatitis eyingozi, noma yiziphi izindlela ezinama-burdock azinconywa.
Nge-pancreatitis engapheli, kuphela ngokuxolelwa isikhathi eside, qiniseka ukuxhumanisa ukwamukela kwayo nodokotela okwelaphayo.
Njengoba sibona, esigabeni esibi sesi sifo kwenqatshelwe ngokuphelele ukuthatha amakhambi abantu asuselwa ku-burdock. Kusetshenziswa kuphela lapho kudabukisa nezinye izimpawu ezibuhlungu.
Esikhathini sokwehla okuphikelelayo kokubonakaliswa kwalesi sifo, ungasebenzisa izinhlobonhlobo zezitho zomzimba, ezinye izinhlobo zezidakamizwa ngalesi sitshalo. Ukusetshenziswa kwazo njalo kusithinta kahle isimo sesitho esigulayo.
Ukulimala okungaba khona ezidakamizweni ezenzelwe i-burdock
Noma yimuphi umuthi, kungakhathalekile ukuthi unjani (amakhemikhali noma amakhambi), unokuphambana ngokusetshenziswa kwawo. Ngakho-ke, ngaphambi kokuqala ukusebenzisa izindlela zokupheka zabantu, udinga ukubonisana nodokotela. Uchwepheshe kuphela ongasho ngokuqinisekile ukuthi kuvunyelwe yini ukubayisa kwisiguli esithile noma ukukhetha enye inketho.
I-Burdock ayihlukile, noma kunjalo, ayinakho okokuphambana kokusetshenziswa, ngaphezu kwalezi zinto ezilandelayo:
Njengoba ubona, imingcele yalesi sitshalo imbalwa ngokumangazayo, okwenza kube uhlu lwama-phytochemicals awusizo kakhulu.
Ngesikhathi sokuzala, ukusetshenziswa kwe-burdock kudinga ukuqashelwa kanye nemvume yangaphambi kokwelashwa. Ukusetshenziswa kwesitshalo ebuntwaneni kuvunyelwe uma kungekho ukusabela komzimba kuso.
Mayelana nemiphumela emibi, iziqephu zemiphumela emibi ezinesidakamizwa esedlula esuselwa ku-burdock zazibonakala kumacala angawodwa. Ngokusebenzisa itiye ngokweqile kulo, ukubonakaliswa okwandayo kokungezwani komzimba kungenzeka, kanye:
Uma kwenzeka ubonakaliswa umtholampilo onjalo, kufanele ushayele i-ambulensi. Kubalulekile ukugcizelela ukuthi lezi zimpawu zivame ukungabekwa mthwalo ku-burdock uqobo, kodwa ekungcolisweni kwayo nge-belladonna, isitshalo esihlobene eduze lapho i-atropine enobuthi ikhona.
Ukuze ugweme imiphumela emibi enjalo, kubantu abangakwazi ukwahlukanisa ngokuphelele phakathi kwezimpande ze-burdock ne-belladonna rhizome, kungcono ukuthenga lo muthi emakhemisi.
Izindlela zokupheka ze-Folk zokusetshenziswa kwezitshalo ze-pancreatitis
Kakhulu kusetshenziswa umuthi wamakhambi, kusetshenziswa amaqabunga kanye ne-rhizome ye-burdock. Kukholelwa ukuthi impande ye-pancreatic burdock ye-pancreatitis ingenye yezindlela zemvelo ezinhle kakhulu zemvelo. Ngenhloso yokwelapha, lesi sitshalo sidinga ukuqoqwa kude nemigwaqo ephithizelayo nezindawo zezimboni. Okukhethwa kukho okuhle kungamamaki nezifufula kude nezindawo ezinkulu.
Ukuze uthole usizo olupakeme kakhulu lokuphulukisa oluvela kuye, udinga ukwazi ubuqili obunjalo:
Amahlamvu avunwa ezinyangeni zasehlobo.
Izimpande - ekuqaleni kwentwasahlobo noma ekwindla, kuyilapho kuphela ezitshalweni ezincane ezingekho ngaphezulu konyaka.
Uma kungenakwenzeka ukuzilungiselela ngokuzimela izinto ezingavuthiwe, izindleko zomuthi ezenziwe ngomumo ngalesi sitshalo zingathengwa ekhemisi.
Ukwelashwa kwe-pancreatic pathology, kwenziwa izindlela ezimbili eziyinhloko zokusebenzisa i-burdock:
Ijusi leqabunga elisha Le nketho ilungele kakhulu iziguli esezikhulile ezinesifo se-pancreatitis, ngoba umzimba okule minyaka uvame ukuthathwa ukuqunjelwa
Isilinganiso se-Rhizome Ekuqhubekeni kwesifo, kungcono ukusebenzisa izimpande
Ungakhohlwa ukuthi noma yimiphi amakhambi amakhambi awakwazi ukufaka esikhundleni somuthi ngokuphelele, kepha angawandisa umphumela wawo futhi abe nomphumela owengeziwe.
Ngakho-ke, hlobo luni lwezidakamizwa zokuphulukisa olunikezwa umuthi we-herbal ekwelapheni i-pancreatic gland?
Ijusi elilungiselelwe kusuka ku-burdock pancreas likhulula izimpawu zepancreatitis kahle, ngaphezu kwalokho linomphumela omuhle we-choleretic.
Ukulungiselela umuthi onjalo, kuzodingeka amaqabunga amasha nezimpande ze-burdock, eziqoqwe ezinyangeni zasehlobo. Hlanza izinto zokusetshenziswa kahle, zomile ngebhanela noma ithawula bese usika kahle. Cindezela i-gruel, gxilisa uketshezi oluphuma.
Thatha izikhathi ezintathu ngosuku imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla, umthamo unqunywa ngudokotela ngawodwana. Ukunciphisa ukunambitheka okumunyu ku-ujusi, ungangeza uju oluncane noma unciphise ngenani elincane lamanzi. Isikhathi sokwelashwa siyizinsuku eziyi-7, bese kuthi ikhefu masonto onke bese ukwelashwa kuphindwa futhi.
Amaqabunga nezimpande ze-burdock, hlambulula, womile bese ukhetha. Thela i-vodka noma utshwala, gcizelela usuku. Izithako zithathwa ngokulingana okulinganayo.
Lapho usebenzisa leli thuluzi, ungakhohlwa ukuthi iziphuzo eziqukethe utshwala azinakuthathwa ngamanani amakhulu nge-gland eshisiwe. Ngakho-ke, izidakamizwa ezisuselwa kuzo zilungele kakhulu iziguli ezinesigaba sokuqala se-pancreatitis.
Ukufakwa kwezimpande ze-burdock nezikolweni
Udinga ukuthatha u-2 tbsp. izimpande zegriga yezipuni kanye ne-1 isipuni ngasinye ifindo lomfula Thela inhlanganisela ephumela ku-600 ml wamanzi abilayo, shiya amahora amabili uthathe ingilazi ngaphambi kokudla.
Kala 2-3 tbsp. izimpande ezisikiwe ze-burdock bese uthele u-750 ml wamanzi, uwathele amahora angama-3-4. Bese uletha kumathumba, ubilise imizuzu engama-15 phezu kobushushu obuphansi, upholile futhi uhlukumeze. Thatha izinkomishi ezi-0,5 izikhathi ezingama-2-3 ngosuku ngemuva kokudla.
Imiphumela yokuphulukisa ye-burdock ithuthukiswa kakhulu ngokuhlanganiswa namanye amakhambi okwelapha. Ngokusekelwe kubo, ungalungisa isiphuzo esilandelayo esinempilo:
Lezi zitshalo zinezindawo ezinhle ezilwa nokuvuvukala, zivuselela ngokuphelele ama-pancreas, zisiza ukuqeda i-bile kanye nobuthi, zivimbela umsebenzi wamagciwane.
Gaya zonke izakhi (ezingxenyeni ezilinganayo), hlanganisa, ulinganise 1 tbsp. izinto ezingavuthiwe ezibangelwa, uthele 1 inkomishi yamanzi abilayo bese ugcizelela ihora eli-1. Phuza inkomishi engu-0.5 izikhathi ezintathu ngosuku.
Ukudla kwesengezo nge-burdock
Namuhla, ikhemisi likethekeli alinikezi kuphela izimpande zemvelo ezomile, amaqabunga nezinye izingxenye ze-burdock. Kukhona futhi izithasiselo zemvelo ezisebenzayo, lokho okubizwa ngokuthi izithasiselo zokudla, okulethwe ngezinguqulo eziningana:
Ake sibheke kabanzi ngemininingwane yabo nezimpawu zabo ezihlukile.
Izici zezithasiselo zokudla
Amakhandlela Babhekwa njengefomu elihle kakhulu lokusetshenziswa kwangaphakathi. Izinto ezingavuthiwe kubo yisihosha sesisindo somzimba. Umthamo ophelele ngamaphilisi angama-1-2 izikhathi ezintathu ngosuku ngokudla
Khipha Ama-rhizomes abo amancane esitshalo ayenziwa futhi ayijusi yokugxila ephezulu yokuphatha kwangaphandle nangaphakathi. Ngaphambi kokuyithatha, ihlanganiswa namanzi ngokulingana ngokwemiyalo
I-powder eyomile Yenziwe kusuka ezimpandeni ze-burdock ezomile futhi isetshenziselwa ukwenza i-tee kanye ne-decoctions
Ukubuyekezwa mayelana nesitshalo sokwelapha
Iqiniso lokuthi ama-ejenti asuselwa ku-burdock akhombisa empeleni umphumela omuhle kakhulu wokuphulukisa i-pancreatitis kufakazelwa izibuyekezo eziningi zeziguli ezinalesi sifo esiyinkimbinkimbi.
U-Igor Petrovich, oneminyaka engama-72 ubudala: Ngine-pancreatitis engamahlalakhona. Kufanele uhlale uhlala emithini ekhethekile nokudla okuqinile. Kodwa-ke, ngihlala ngifuna ulwazi ngamathuluzi amasha angaqeda lesi sifo. Ngokushesha lapho ngithola izindlela zokupheka ezivela ku-burdock, nganquma ukuzama. Ukusetshenziswa okuhleliwe kwe-decoction kusuka ezimpandeni zayo kuyasilula impela isimo sami.
UVictor, iminyaka engama-49: Umuthi omuhle kakhulu we-herbal we-pancreatitis uthathwa njenge-decoction ye-burdock. Lapho ngiqala ukukuthatha, ngikhohlwe ngokushesha ngokugula kwami, okuyinto engangikhathaza kakhulu phambilini, yize ngangihlala ngisebenzisa umuthi futhi ngilandela nokudla.
U-Olga, oneminyaka engama-32: Ngemuva kokuphinda aqale ukuvuvukala kokuqina kwamanyikwe, waqala ukuphuza ukumuncwa kusuka kumakhasi e-burdock. Ezinsukwini ezintathu ngemuva kokuqala kokwelashwa, wazizwa engcono kakhulu, izimpawu zesifo zancishiswa kakhulu.
Izitshalo eziningi zokwelapha, kufaka phakathi i-burdock, ziyindlela enhle kakhulu kumalungiselelo wemithi athinta kabi isibindi. Uma uwaqoqa ngokufanele futhi ngendlela efanele ulungiselela imishanguzo kuwo, khona-ke izinzuzo zomzimba zizobaluleka.
Kodwa-ke, ngaphambi kokuthatha isinqumo sokusebenzisa umuthi we-herbal, kungcono ngokubonisana nochwepheshe. Udokotela uzokutshela izinketho ezinhle kakhulu zemiyalelo kanye nomthamo odingekayo, ngokusekelwe ezicini zesifundo salesi sifo.
Ungayiphatha kanjani i-pancreas ngomhlonyane futhi kungenzeka ukuyiphuza nge-pancreatitis
Uma usetshenziswa kahle, umhlonyane awusebenzi kangako kunomuthi. Kodwa-ke, ukuthi khona kwesicelo saso kuxhomekeke kakhulu
Amaresiphi wokusebenzisa isinamoni we-pancreatitis ngezinjongo zokwelapha nezinzuzo zako zomzimba
Nge-pancreatic pathology, ukusetshenziswa kwayo kufanele kukhawulelwe. Ngakho-ke, ngokuvuvukala okungapheli kwamanyikwe, awusakwazi ukusebenzisa futhi
Ukusetshenziswa kwamakhambi kanye nezindlela zokupheka zabantu ukwelashwa kanye nokubuyiselwa kwendlala esigabeni esingelapheki se-pancreatitis
Ngokungafani nemithi, izindlela zokupheka zemvelo azivusi imiphumela emibi. Amakhambi nezinye izakhi zezitshalo zisebenza ngokunensa, kepha ngempumelelo
Izindlela zokuhlanza ama-pancreas ekhaya ngezidakamizwa nezindlela zokupheka zabantu
Ukuhlanza umzimba kubandakanya ukusetshenziswa kwezindlela zokupheka zabantu nezidakamizwa eziqashelwa umuthi osemthethweni. Yiliphi ikhambi okufanele ulisebenzise kuqala?
Ehlobo ngiba ne-burdock efana ne-panacea. Ngifudumeza kancane epanini lokuthosa, bese ngidlula nge-grinder yenyama ebhukwayo kanye nesipuni 1 sepuni engilazini yamanzi abilayo. Ipheshana emathunjini likhwela kalula, kepha udinga ukukhetha umthamo ngamunye njengoba abaningi begula ngesenzo salo se-choleretic
PROTAFAN NM PENFill 100ME
Ongakwazi ukukudla ngohlu lwesifo sikashukela semikhiqizo
I-burdock isiza kanjani ukwelapha isifo sikashukela
I-Cardiochek PA - ukuhlaziywa kwe-biochemistry
Ungaphatha kanjani ukushiswa okuphuma emanzini abilayo kashukela
Ungayelapha kanjani eshisiwe ngohlobo 2 sikashukela? Iqinisa amazinga kashukela isikhathi eside Ibuyisela ukukhiqizwa kwe-insulin yi-pancreas. Ukwelashwa kwamajoyinti, abafundi bethu basebenzisa ngempumelelo iDiabeNot. ...
Imithi kanye namafutha okugcoba ekwelapheni i-atherosclerosis yamaphethelo aphansi
AmanyikweIsifo sikashukela nezinsoIsifo sikashukelaInsulinImithiUkudla ngesifo sikashukelaIzinkinga zesifo sikashukelaIzindlelaUkwelashwa nokuvimbelaAmamitha kashukela egazi
Ubuhlungu bomlenze kushukela
Ukubambisana ngokubambisana kwe-insulin notshwala kuwuthinta kanjani umzimba: imiphumela yokusebenzisa kanyekanye
IGlycated hemoglobin, iyini futhi ungayinciphisa kanjani?
Amafutha omnqumo wesifo sikashukela sohlobo 2
Ukuzila isilinganiso se-insulin kubantu abadala nezingane
Ingabe ushukela uyingozi kubantu?
Isifo Sikashukela: Ulwazi olubalulekile, 2018